PressReader - Kwayedza: 2017-06-23 - Mufundisi akakwatura Mai Mufundisi
Mufundisi akakwatura Mai Mufundisi
Kwayedza - 2017-06-23 - Nhau Dzemuno - Muchaneta Chimuka
MUFUNDISI wechechi yeVictory International Ministries kuChitungwiza akamiswa pamberi pedare reko ndokubatwa nemhosva yekurova mudzimai wake achimupomera kuita chipfambi.
Mutongi wedare reChitungwiza Magistrates Court, Yeukai Chigodora, akapa Norest Black ( 39) wepanhamba 16559 Unit M, chirango chekugara mujeri kwemwedzi mitatu, iyo yakazosendekwa yose padivi paine chitsiidzo chekuti haapare mhosva yerudzi urwu zvakare mukati memakore mashanu.
Muchuchisi Farai Katonha akaudza dare kuti nomusi wa15 Chikumi munguva dzemanheru, pakamuka kusanzwisisana pakati paBlack nemudzimai wake, Lean Thomas (23), sezvo aifungira kuti ari kuita zvegumbo mumba gumba kunze.
Black akabva arova mudzimai wake nembama mumusoro zvikaita kuti mukadzi uyu anomhan’ara kumapurisa mufundisi uyu ndokubva asungwa.
“Pazuva iri ndakasangana nemurume wangu paSeke Teacher’s College kuUnit O, kuChitungwiza achibva atanga kundipomera mhosva yekuti ndiri kudanana nemumwe murume anonzi Wisdom Matambanadzo anova shamwari yangu. Gakava iri harina kupera zvakanaka apo murume wangu akandirova nembama mumusoro kaviri kese zvikaita kuti ndinomumhan’arira kumapurisa,” anodaro Thomas.